Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: Rajab Xayyib Erdoğan
Namni Kuni Maqaan Isaa Rajab Xayyib Erdogan Jedhama. Prezidaantii Biyya Turkiiti. Dhalatee kan guddate Magaalaa Istaanbulitti. Waggoota Kudhaniif Muummee Ministera biyyattii ta'uudhaan tajaajileera. Sana duras Kantiibaa Magaalaa Istaanbul ta'uudhaan tajaajileera. Yeroo ammaa Preİdaantii ta'uudhaan tajaajilaa kan jiru yogguu ta'u waggaa 13 keessatti biyya isaa rakkoo hamaa keessaa baasudhaan adduunyaa irratti biyyoota dagagan jidduu hiriirsisuu danda'eera. Biyyattiinis qabeenyaan miseensa G20 akka taatu, homaa waraanaatin 8ffaa akkasumas miseensa NATO akka taatu godhuu danda'eera. Wayta inni gara aangoo dhufe biyyattiin liqaadhaan maqaan ishee kan ka'aa ture tahus amma mataan ishee Baanki Addunyaatitti maallaqa guddaa kufattee lafaa qabdu taasiseera.
Erdogan Biyyoota tokko tokko biratti Abbaa Irrummadhaan kan himatamu ta'us dorgommii dhiyeenya kana hoggantoota adduunyaa jiddutti kaampaanii qorannaaf qo'annaa biyya xaaliyaanitiin gaggeefameen Baaraak Obaamaafi Bladmir Puutinin dursuudhaan Hogganaa Cimaa ta'uun tokkoffaa ta'ee filatameera.
Guyyaa har'a tasuma gareen hoomaa waraanaa tokko fonqolcha mootummaa gaggeessudhaaf yaalii guddaa godhee ture. Biyyattii too'annaa teenya jala galchineerras jechuun Televizyiinidhaan labse. Jidduu kana Ummanni biyyattii rifaatuu guddaa keessa gale. Haaluma kanaan osoo jiruu Prezidaantin biyyattii eddoo hin beekamnee bilbilaan Ummanni gara dirreetti bahee jarreen kana dura akka dhaabatu waamicha gabaabduu taasise. Miidiyaalefi biyyoonni gara garaa dhaamsa bilbilaa kana dhagayan dhuguma biyyattiin harka Prezidaantichaatii baateerti jechuun labsuu eegalan. Osoo biyyi isa harka jiraattee silaa TV irratti as bayee ummata isaatti dubbata jedhanii dubbatan.
Deebin ummatichi kenne garuu baay'ee nama ajaa'iba. Prezidaantichi waamicha gaggeessee osoo daqiiqaan kudhan hin guutin karaa irratti yaa'e. Preezidaantii keenya osoo nuti hin dhumin ati hin duutu, si waliin jirra, lubbuu teenya siif kennineerra jechuun dhaadannoo dhageessan. Haaluma kanaan ummatichi mootummaa ofiitiif aantummaa agarsiisudhaan namoota fonqolcha kanarratti hirmaatan takka takkaan harkatti galfatee kaayyoo isaanii guutumaan guututti fashalsiisuu danda'eera. Mootummaan aantummaa ummataa qabu, kan filannoo haqaatiin gara aangoo dhufe gaafa rakkoon dhalates ummatuma isaatti dheessa.
Osoo kan keenya ta'ee garam dheessinnu laata?!!!